Ny fametrahana ny workflows amin'ny tranokalan'ny webcasting indrindra amin'ny Matrox® Monarch EDGE - NAB mampiseho ny vaovao amin'ny Broadcast Beat, ny fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny fametrahana ny workflows amin'ny tranonkalan'ny webcasting indrindra amin'ny Matrox® Monarch EDGE
Ny fametrahana ny workflows amin'ny tranonkalan'ny webcasting indrindra amin'ny Matrox® Monarch EDGE
Ny horonan-tsary an-tserasera sy ireo sehatr'asa ambony (OVP sy OTTs) dia mihamitombo tsy tapaka. Ireo mpampiasa dia afaka misongadina amin'ny fanararaotam-baovao amin'ny fanavaozana ny tranonkala - toy ny taham-pahalalana avo lenta (HFR) 4K, 4K 360 VR, ary famintinana fakantsary marobe - izay tohanana amin'ny mpilalao horonantsary an-desktop, mobile, ary Smart TV. Natao hisafidy ny fandefasana mivantana mivantana ny androany, Matrox Monarch EDGE dia manome fampielezam-peo sy mpampiasa horonantsary hafa miaraka amin'ny rindrambaiko matevina, ambany sy ambany ary dynamic H.264 ny fehezan-koditra napetraka ao anaty fitaovana marefo, ambany ary herinaratra.
Mampiasà fomba fanao mahazatra mifanaraka amin'ny fenitra anio
Ny codex H.264 dia ekena manontolo ho an'ny fandraisana an-tserasera sy ny mivantana mivantana. Ny fampiharana miavaka ny Monarch EDGE dia mitazona ny taham-pahaizana manokana tsy misy fetra ary manamaivana ny fahantrana rehetra tsy misy fanaovana sorona. Ny fepetran'ny kodia tsy miankina EDGE an'ny Monarch EDGE isaky ny rindrambaiko dia azo ampiasaina mba handehanana mankany amin'ny toerana iray na maromaro. Ny asa tsirairay dia mandray soa avy amin'ny milina maoderina matanjaka sy mipetrapetraka mba hiantohana fa ny sary sy ny feo tsy misy feo dia raketina.
Azo atao ny miezaka ny manamboatra workflows maro, ny Monarch EDGE dia manome hery tsy manam-paharoa sy mahery vaika mifandraika amin'ny fampiharana tsy manintona sy ny famandrihana ny codex H.XUMX. Ny drafitra fampihetseham-po tsotra sy marevan'ny Monarch EDGE dia mahatonga izany ho tsara indrindra amin'ny fametrahana azy ao anaty kitapo, OB van, na miaraka amin'ny sehatra faharoa Monarch EDGE ao amin'ny sehatra 264RU. Ny 1K UHD / multi-HD Ny inputns dia mahatonga an'i Monarch EDGE tena tsara ho an'ny hetsika rehetra miainga amin'ny fakan-tsarimihetsika maromaro, toy ny hetsika ara-panatanjahan-tena sy ny fampisehoana. Amin'ny sehatra kodia avo lenta, ny Monarch EDGE dia afaka manaiky efatra tsy miankina HD fanangonana sy famoaham-streaming maro isan-tsokajiny, ka mahatonga azy ho azo ampiasaina amin'ny fametrahana efitrano fandefasana fitaovana.
Miasa amin'ny asa fisorohana
Ny Monarch EDGE dia tsara ho an'ny fandefasana ireo workflows misokatra amin'izao fotoana izao, toy ireo izay mikarakara ny fangatahana votoaty ao amin'ny 4K UHD. Mba hampiasana tsara kokoa ny tahan'ny karajara EDGE EDGE, 4K UHD, ny tranonkala dia tokony haka horonantsary mampiasa ny fakantsariny sy ny fitaovana 4K UHD UHD ary hametraka ny horonan-tsarin'ny Monarch EDGE ho an'ny OVP safidy. Avy eo dia afaka mamela ny OVP hikarakara fialan-tsasatra ny webcasters. Ny anton'izany dia, raha ny fepetra avoakan'ny fanapotehana kely ambany noho ny 4K UHD dia mety ho tsara ho an'ny screenshots, ny vokatra dia ambany noho ny tsara indrindra ho an'ny lehibe kokoa, 4K UHD-mahavita TV fahita satria ny TV dia tsy maintsy avoakany ny votoaty nomena azy ambany fanapahan-kevitra. Rehefa mandefa rano ao amin'ny 4K UHD amin'ny OVP ny renirano, ireo OVP dia hikirakira ny fividianana fàfana ho an'ny solo-kely kely, toy ny solosaina, tablety ary smartphones mba hahafahan'ny sary kely kokoa hijery ny endrika sary tsara tarehy. Amin'ny fampiasana ny Monarch EDGE, ny webcasters dia afaka manome horonantsary tsy misy vidiny ho an'ny habeny rehetra, ary ny mpijery dia hahita ny vokatra farany miaraka amin'ny haavon'ny kalitaon'ny tontolon'ny webcaster.
Fomba iray hafa ahafahan'i Monarch EDGE manampy ireo mpizara Internet hahatonga ny 4K fandefasana UHD dia mamela ny mpampiasa hisambotra ao amin'ny 4K UHD ary hametraka amin'ny ambaratonga samihafa maro ho an'ny OVP maro samihafa amin'ny fotoana iray ihany. Ohatra, ny Monarch EDGE dia mamela ny hikorianan'ny Facebook amin'ny alàlan'ny fametrahana ny 720p, ary koa ny rohy ao amin'ny YouTube ao amin'ny 4K UHD - raha mbola manana fitaovana fanampiny izay afaka mandeha any amin'ny OVP hafa na mpanolotra serasera toy ny Wowza. Ho an'ny workflows izay mitaky maromaro HD feeds, ny Monarch EDGE dia afaka mametaka maromaro HD Ireo renirano ireo dia omena amin'ny toerana 16 farafaharatsiny mba hahatongavana any amin'ny toerana sy ny toerana misy azy. Ireo webcasters dia afaka manararaotra ny môtera maoderina mampiasa ny Monarch EDGE mba hanitatra ny làlan-kalehany ary hiaraka amin'ireo mpihaino azy any amin'izay misy azy ireo.
Miaraka amin'ny famoahana angona efatra ao amin'ny fitaovana tsirairay, ny Monarch EDGE dia afaka mametraka mora sy manamboatra workflows amin'ny aterineto izay manome votoatin'ny fampiroboroboana ny fakantsary maro momba ny OVP toy YouTube. The
Ny sehatra dia manolotra ny mpampiasa ny fahafahana misafidy sy miovaova eo amin'ny sehatry ny fakantsary maro rehefa mijery ny votoaty. Ankoatra izany, ny serivisy media manerantany mikendry antokon'olom-bolo sy fanatanjahan-tena dia afaka manararaotra ireo singa efatra amin'ny synchronized Monarch EDGE mba hamerenana ny sehatr'izy ireo amin'ny sehatra maro samihafa. Ny Monarch EDGE dia efa nosedraina ary nofantenana avy amin'ny ekipa iraisam-pirenena, ambony indrindra amin'ny baolina kitra ary ekipa rugby ho ampahany manan-danja amin'ny vahaolana amin'ny toerany amin'ny lalao video.
Ny fahaizan'ny Monarch EDGE hanohanana ireo karazana protocols mivelatra dia mamela azy hiditra amin'ny sehatr'asa roa mampiasa ny tambajotra misokatra sy eo an-toerana. Maro ny OVP sy ny seraseran'ny serasera no manomboka manohana ny SRT, loharanom-baovao mivelatra misokatra mivantana izay manome ny fahamendrehan'ny format RTMP hatrizay, ary ny fampihenana ny fahantrana amin'ny fampiasana amin'ny tambajotra misokatra. Ao amin'ny tambajotra ao an-toerana, ny tranonkala dia afaka mifidy MPEG-2 TS na RTSP, arakaraka ny zavatra takian'ny orinasa.
Ny famoahana zava-niainana ankoatra izay omen'ny fandaharana nentim-paharazana nentim-paharazana, ny Monarch EDGE dia nalaza tamin'ny fanavaozana farany tao amin'ny tranonkala fanavaozana ny tranonkala mba hamela ireo matihanina amin'ny horonan-tsary hanodinana ny votoaty miaina amin'ny habeny rehetra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fampiasa an-tserasera an-tserasera amin'ny finday, ho an'ny fitaovana fampiasana fitaovam-pitaovam-pitaterana eo an-dalam-pandrefesana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena, ny Monarch EDGE dia ny fitaovana kodia tsara indrindra hiantsoana ny fandefasana ny tranokalan'ny webcast androany indrindra.
· Venty SDI (3 x 3G, 1 x 12G)
• Asehoy ny fampisehoana DisplayPort (mody tokana na quad)
• Analoga audio na fampidiram-peo
· Famoahana Genlock
· Dual GigE connectors
· Halavan'ny efamira 1RU
• Tafio eo anoloana ho an'ny tarehy sy ny konfigura
· Hery ambany
· Matrox Monarch EDGE Control Hub natokana Windows fampiharana
Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana matrox.com/video/edge/broadcast-beat
fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 fandraisana anjara Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor MStar Fampitana Outside kamiao SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Ultra HD Forum Video injeniera virtoaly zava-misy	2019-06-14
Previous: Fahafahana an-tserasera amin'ny fampielezana ny famoahana lahatsoratra
Next: PBT EU client CLUBBING TV dia manomboka any Ibiza sy Formentera -